OMER BERIZIKY : NOTSIPAHIN’I PR ZAFY ALBERT – MyDago.com aime Madagascar
OMER BERIZIKY : NOTSIPAHIN’I PR ZAFY ALBERT
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny Pr Zafy Albert , manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Nisy ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety ny Talata teo teny amin’ny trano fonenany teny Ivandry. Tamin’izany no nilazany fa efa rava io governemanta io ka mila manangana governemanta vaovao hikarakara fifidianana lalàm-panorenana. Mahakasika ny fanoloana ireo minisitra avy amin’ny movansy Zafy dia nambarany fa vonona hanolotra olona sy handray anjara izahay raha governemanta vaovao tena izy no ifanarahan’ny rehetra fa hajoro. Tsy azo ekena intsony hoy ny Pr Zafy raha izy mianaka Rajoelina sy Beriziky no tompon’ny teny farany amin’ny fananganana ny governemanta, efa raharahan’ny vahoaka rehetra ny mahakasika izany. Momba ny fifidianana dia nambarany fa tsipahinay marindrano ny fanambaniana ny vahoaka Malagasy ataon’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin’ny alalan’ny fanatanterahana io fifidianana io.
Rehefa nisy ny fanendrena an’Ingahy Beriziky ho Praiminisitra, tamin’ny fiandohan’ny governemantan’ny marimaritra iraisana dia efa nanambara sahady izy fa tsy avy amin’ny Ankolafy Zafy fa ho an’ny vahoaka Malagasy. Nambarany ihany koa fa ny patron-ny dia ny tondrozotra. Roa taona aty aoriana anefa dia maro ny andininy ao amin’io tondrozotra io no tsy notanterahiny, anisan’izany ny andininy faha 20 izay milaza fa miverina tsy misy fepetra ireo sesitany politika any ivelany , ka anisan’izany ny filoha Ravalomanana Marc, ny famoahana ireo gadra politika rehetra mbola any am-ponja, sivily sy miaramila, ny fanokafana ireo radio izay nakatona nandritra ity tetezamita ity. Maro amin’ny mpanara-baovao no mahita fa tsy mahatohitra ny fahefana ao Ambohitsorohitra ingahy Beriziky, hany ka ireo heveriny ho patron-ny na ny tondrozotra na ny Ankolafy Zafy nanolotra azy aza dia nodiany fanina. Tsangan’olona fotsiny ary angady tsy mahatapak’ahitra ka izao notsipahin’i Pr Zafy Albert izao izy.
Hanarina ny lesoka Zafy
Anisan”ny lesoka lehibe teo amin’ny Ankolafy Zafy ny tsy fanolorana olona avy amin’ny ‘ny mpiaradia aminy, fa nitady olon-kafa ivelan’ireo mpiara mitolona aminy ka tafiditra amin’izany Ingahy Beriziky izay diplaomasia no tena kilalaony fa tsy rafitra mpanatanteraka. Ankehitriny anefa dia mahatsapa izany fahadisoana izany ny Pr Zafy Albert ka mahatonga azy tsy maintsy hanolo ity Praiminisitra ity. Raha ny fantatra dia efa misy ny anarana mandehandeha ny amin’ny handray io toeran’ny Praiminisitra io ho an’ny Ankolafy Zafy, toy an’Andriamatoa Serge Zafimahova, Marcel Miandrisoa.
Auteur Solo Razafy*Publié le 4 septembre 2013 4 septembre 2013 Catégories Politique
Précédent Article précédent : CES VAOVAO : NAHAZO 4X4 HO TAMBIN’NY NANALANA AN’I NENY
Suivant Article suivant : FILOHA RAVALOMANANA MARC : HANDRAY FANAPAHAN-KEVITRA ISIKA AMIN’NY SABOTSY